FAINGO NIOVA TOERANA
Tao amin'ny fanjakana iray no niseho ny tantara. Migadra mandra-pahafatiny manao asa an-terivozona ity lehilahy iray. Efa nahavita an-taonany maro izy ka nangataka famindram-po tamin'ny lehiben'ny fitsarana ambony.
Sendra nitsidika ny tranomaizina ny mpanjaka indray andro ka nampitainy ny hetahetany momba ny fangatahany. Tsapan'ny mpanjaka ny fiovana lalina tamin'ity lehilahy ity araka ny fitantaran'ny lehiben'ny tranomaizina azy, nefa dia nilaza ny mpanjaka fa tsy manana fahefana honome famindram-po afa-tsy ho an'ny olona voaeloka ho faty ihany, fa mpanao sonia fotsiny izay didim-pitsarana avoakan'ny mpitsara ambony. "Rehefa voasoniako ny didim-pitsarana vao manan-kery, hoy ny mpanjaka, nefa tsy mahazo manova na litera iray ao aza aho, fa ny azoko atao ho anao hoy izy nanohy ny teniny, dia ny mba hanafainganana ny fandinihana ny fangatahanao mba hitonian'ny sainao amin'izay ho anjaranao".
Tsy ela taorian'izay dia nivoaka tokoa ny didin'ny fitsarana ambony nanao hoe "FAMINDRAM-PO TSY AZO, TAZONINA AN-TRANOMAIZINA".
Nalefa nosoniavin'ny mpanjaka izany. Rehefa voasonia dia naterina tany amin'ny lehiben'ny tranomaizina. Namaky ilay taratasy ny lehiben'ny tranomaizina ary dia navoakany tamin'ny fifaliana niaraka tamin'izay ilay lehilahy. Afaka soa aman-tsara izy.
Taitra ny filohan'ny fitsarana ambony nahare izany ka nampiantso ity tompon'andraikitra. Dia nasehon'io azy ilay didim-pitsarana nanao hoe "FAMINDRAM-PO, (faingo) TSY AZO TAZONINA AN-TRANOMAIZINA".
Zendana ilay mpitsara. Tsy nanova na dia litera iray aza ny mpanjaka fa ny faingo fotsiny no nanova ny toerany, ary tsy misy zavatra tsy ara-dalàna amin'izany, nefa dia niova tanteraka ny didy nivoaka.
Dia toy izany koa ny Tompo amintsika. Raha ny fahalementsika tokoa no jereny dia tsy misy famindram-po mendrika ho antsika, nefa "maharim-po sady be famindram-po Izy" ka "mamela ny helontsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny fahamarinana rehetra". Ny andrasany aminao?? Fibebahana! Miaky fa mpanota ary miverina aeo am-pototry ny hazo fijalian'i Jesoa Tompo tia. Rehefa izany dia hanafaka anao madidio Izy.
"Ary amin'izany dia tsy misy fanamelohana an'izay ao amin'i Kristy Jesoa". Rom 8:1